Global Voices teny Malagasy » Korea : Ho firenena mpiteny anglisy ? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Janoary 2008 16:18 GMT 1	 · Mpanoratra Hyejin Kim Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Korea Atsimo, Fanabeazana, Politika
Hiteny anglisy avokoa ny Koreana rehetra afaka fotoana fohy. Hiakatra ve sa hidina ny faneriterena raha miteny anglisy ianao na tsia? Nilazain’ny governemanta vaovao, ekipa tetezamitan’i Lee Myung Bak fa ho ampianarina amin’ny teny anglisy avokoa ny taranja rehetra. Herinandro taty aorian’ny nanambarana io drafitra io dia mbola henika ity raharaha ity avokoa ny vohikala sy ny joro fanehoan-kevitra maro.
Tsikerain’i Kim Hyung Seok  ny antony hanandratana ny teny anglisy mihoatra noho ny fitaizana fototra.
[…]Lalam-pifandraisana ny (teny) anglisy (Anglisy amin’ny mahaanglisy azy, fa tsy ny litoeratiora anglisy). […] Tsy hahitam-bokany eo amin’ny fandaniana (vola) ny tian’ny fitondran’i Lee Myung Bak irosoana. Mila fitiavana be dia be ny fitaizana anglisy aloha raha te-hanatratra ny sekoly anglisy. Sarotra be tsy ho tontosa izany hanam-pahazarana (teny) anglisy izany. Izany hoe mila renivola goavambe sy fotoana lava mihitsy raha te-hizatra (teny). […] Tiako avoitra indray mandeha indray fa fanampim-pifandraisana ny teny anglisy. Tokony hanam-pahalalana midadasika sy fahaizana norantovina ny zanatsika ary mahay mamakafaka dieny mialoha. Raha eo amin’ny fomban’ny olana sy ny vahany dia azo hatsangana ho toy ny safidy ny (teny) anglisy. Izay tsy mila teny anglisy dia tsy tokony hoterena hianatra teny anglisy. Raha tsy misy ny faneriterena (stress) dia efa ampy ny teny anglisy hiadiana amin’ny fiainana. Miahiahy aza aho fa manana fifandraisana miafina amina sekoly na (fanomezan-dalana) Anglisy ny fitondran’i Lee.
Narangarangan’ny fitondran’i Lee moa fa hitarika amin’ny fihenan’ny fampianarana tsy miankina ny fanovana ary hampitombo kosa ny ampianarana anaty fanotoloana. Saingy tsy manaiky izany hevitra izany ny olonineto .
[…] Tsara faneno. Iza indray no ty mahalala fa ilaina ny fahaizana teny anglisy ao anatin’izao tontolon’ny fanotoloana izao ary tokony ahena ny sekoly tsy minakina andoavam-bola? Ny olana dia izao, tsy mifanaraka amin’ny zavamisy ny fanasongadinana ny teny anglisy ary hitombo ny sekoly tsy miankina andoavam-bola. Manaraka izany dia tsy hanampy ho amin’ny fanotoloana ankafiziny fatratra ny tolo-keviny. […] Ny fototra lehibe ilaina amin’ny programa fanasongadinana ny teny anglisy dia ny fanampiana ny tontolon’ny olona matihanina ahafahany mampianatra teny anglisy. Saingy indrisy, tsy ampy isa izany matihanina izany. Tsy azo heverina ny hananana sekoly miteny anglisy amin’ny fampianarana misy ankehitriny. […] Hampihenana ny sekoly tsy miankina andoavam-bola? Hevi-dravina izany. Raha araka ny petra-keviny izany dia tsy tokony hisy sekoly tsy miankina eto Korea. Mandray an-tanana ny mpianatra ho eny amin’ny sekoly ambony ny fampianarana miankina (amin'ny fanjakana), ary efa ampy ny fikarakarana hifaninanana hiditra any amin’ny anjerimanontolo efamisy boky sy EBS (fantsotsarim-mpampianarana any Korea : mpanoratra). Nahoana isika no mila fampianarana tsy miankina ? Ny anto-pisian’ny sekoly tsy miankina voalohany dia ny handresy ny mpifaninana hafa. Faharoa, tsy dia tsara loatra ny fampianarana tantanin’ny fanjakana. Na dia misy aza ny sekoly miteny anglisy dia tsy hanjavona mihitsy ny antony voalohany (voalaza teo), rah ambola misy koa ambaratongam-mpampianarana ambony. Ary mbola ho gravy kokoa ny antony faharoa. Araka ny efa nomarihiko teo aloha moa dia tsy ananana mihitsy ny olona hampianatra teny anglisy. Tsy mahafa-po ny mpianatra ny fampianaran’ny fanjakana. Dia izao ihany koa, raha hiova ho mpiteny anglisy ratsiratsy eo moa ny fianarana teny anglisy, dia iza no hihaino azy ? hiesona ao an-tsekoly fotsiny izy ary hirohotra any amin’ny sekoly tsy miankina rehefa mirava avy eo. […] raha mitaky fitenenana teny anglisy ny sekoly ambony dia hirohotra any amin’ny sekoly mianatra amin’ny teny anglisy ny mpianatra amin’ny ambaratonga antenantenany. Raha hampihatra ny fampianarana teny anglisy ny any amin’ny ambaratonga fototra dia mbola ho voatery hiverina any amin’ny garabolan’ny teny anglisy ny ankizy. Mazava loatra fa tsy maintsy voaloan’ny ray aman-dreny avokoa ny vola. Raha tsy mahaloa moa ry zareo ? dia tsratsara hoanao kokoa ny nahomby.[…] Inonamoa no ho azon’ny mpianatra avy amin’ny mpampianatra miteny konglisy (koreana anglisy) (tsyhoemanambany ny mpampianatra aho fa rariny loatra raha tsy tsra loatra ny fahaizany teny anglisy satria tsy zatra izy). Hafa ny any amin’ny firenenkafa mampiasa ny teny anglisy ‘amin’ny fiainana andavanandro). Dia inona moa no hataontsika amin’ny mpianatra miteny Konglisy? Fahadalana ny manohitra ny fanotoloana[…] Mamono ny fampianarana tantanin’ny fanjakana ary mampidina ny toe-karenan’olom-pirenena …bala iray mahafaty roa izany.
Nanangana lahatsoratra mampihomehy nosintonina avy amin’ny drafitry ny fitondran’i Lee i Deulpul .
(Seoul=Yeonap News) Hataon’ny fitondrana Lee amin’ny teny anglisy avokoa ny fihaonana rehetra. Hoy ny filoha voafidy ekipa tetezamita Lee Kyung Sook nandritra ny valandresaka tamin’ny 23 teo hoe : “Manomboka anio dia hotontosaina amin’ny teny anglisy avokoa ny fihaonana sy ny valandesaka tanterahin’ny fitondrana Lee Myung Bak.” Ka raha nisy mpanao gazety nanontany hoe, “Midika ve izany fa ho teny ofisialy ny teny anglisy?,” Dia novalian-dRamatoa Lee soa aman-tsara hoe, “Eny.”
Navoitran’i Madama amin’izay fa “manam-pahaizana nivoaka avy tamin’ny oniversite avokoa ny olona eto. Noho izany tsy mitombina ny filazana fa tsy afa-miresaka teny anglisy amin’ny andavanandro izy ireo.” Ho fanampin’izany fihaonana ofisialy izany dia hatao amin’ny teny anglisy ihany koa ny resaka amin’ny antso finday. Izay mpikambana rehetra manohitra io fitsipika vaovao io dia ahidina any amin’ny vaomieran’ny Fahamarinana sy ny fampihavanana, Repoblikan’i Korea (hoy ny mpanoratra hoe :Efa nolazain’ny fitondrana Lee ny fikatonan’io vaomiera io). Na izany aza dia narindra ho amin’ny 9 ora ka hatramin’ny mitataovovonana ny fotoam-piasan’ny ekipa. Ny ora hafa ankoatra izay dia atokana hianarana teny anglisy avokoa. Efa nifndra toerana eo akaikin’ny biraom-piasan’ny fitondrana Lee rahateo ny sekoly malaza vitsivitsy amin’ny fampianarana teny anglisy any Kangnam. Hoy ny tonian’ny sekoly K fa, “hanana ny toeram-boninahitra ambony kokoa noho ny ekipa ny mpampianatra teny anglisy.”
Mba hialana amin’izay fiantraikany ratsy izay dia noheverina fa efa nitady fifanarahana tamin’ny mpiasan’ny WalMart ry zareo, io tranombarotra io moa dia iray amin’ireo tranombarotra lehibe msokatra any Etazonia. Avy amin’io tranombarotra io no hakana mpiasa teratany manana ny diplaoma (ambany indrindra) hampianatra azy ireo. Raha tontosa soa aman-tsara moa ny fifanarahana dia ny mpiasan’ny Walmart izany no hitarika ny mpikambana amin’ny ekipa (governemanta) Lee. Azo heverina avy hatrany ny hisian’ny fifampihenjanan’ny fahefan’ny mpikambana amin’ny governemanta Koreana sy ny mpiasan’ny WalMart. Hoy moa i Lee Kyung Sook hoe, “Ny fandaniana be loatra no tianay atsahatra mba ahafahana manatratra ny tsena iraisam-pirenena.” Ny olona sasany kosa manadihady fa entina hisorohana zavatra ity drafitra ity satria be resaka daholo ny mpikambana ao amin’ny fitondrana Lee sady manao valan-dresaka maro loatra. Koa raha tsy maintsy amin’ny teny anglisy no hanaovana ny resaka dia hikombom-bava kokoa ny rehetra, hihena kokoa ny resaka.
Fanampin’izany dia efa voasolo ho fitaovan’ny mpiteny anglisy ny telefonna ampiasain’ny fitondran’i Lee. Tapaka ho azy ny resaka raha vao miresaka amin’ny fiteny hafa ry zareo. Ny Korea Communication izay manolotra ny fifandraisana ho an’ny ekipa tetezamita moa dia efa nanambaramialoha fa hihena be dia be sy haingana ny vola lany amin’ny fifandraisana. Raha ny marina, dia antso roa ihany no vita hatramin’izay niovan’ny telefonna izay herinandro izao. Ary fahadisoana oona antsoina azany iray.
Nanontany azy ny mpanao gazety iray nandritra ny valandresaka hoe nahoana i Lee Kyung Sook no tsy nanao famelabelarana tamin’ny teny anglisy. Teritery ny namaliany hoe “All did at that time” (tokony ho efa vita daholo izay natao amin’izao fotoana izao) ary dia najanony haingana iny.
Ny mpampianatra Koreana  no iray amin’ny vondron’olona iantefan’ity drafitra vaovao ity indrindra.
Efa manavazana amin’ny fampianarana any amin’ny anjerimanontolo aho. Eo ampikarakarana ny fitsapana fampianarana ao amin'ny sekoly (ambony) ao Noryangjin, Manome lanja ireo mpampianatra hisedra fahasarotana lalina mandritra ny efa-taona aho … eo ampamakiana gazety aho …. Hampianatra ny taranja rehetra amin’ny teny anglisy. Fisainana manao ahoana moa no nahatonga an’i Lee Myung Bak hanao izao soso-kevitra politika izao? Lovan-kolotsaina idiran’ny fo sy ny fanahy ny fiteny.
Ho an’ny ray gisa? [http://news.ncmonline.com/news/view_article.html?article_id=1585a9d19045a34b8d1de6b0794735fb] Moa ve tsy hiasa ho an’ny vahoaka manontolo no notenenin’i Lee? Firy amin’ny ankapoben’ny olona sahirana moa no ray gisa?
Ho fampidinana ny sekoly tsy miankina? Tiako ho fantatra mihitsy izay ao an-dohany mahalala fa hampihena ny fampianarana tsy miankina ny sekoly Anglisy. Ary tsy maintsy ho verezina ve izany izay mpianatra tsy mahay teny anglisy ? Raha te-hanenjika kilasy dia tokony hankany amin’ny sekoly tsy miankina izy ireny.[…]
Moa ve tsy eritreretin-dry zareo fa ny politika hampihenana ny sekoly tsy miankina indrindra no hahamaro ny sekoly tsy miankina? […]
Firenena matanjaka ny mpiteny anglisy? Tsy vitsy ny Olonineto  no manontany amin’izany fifandraisana izany, rah amandray ho ohatra an’i Philippines.
I Philippines, izay nahazo ny fahaleovantena noho ny fanohanan’i Etazonia … noho ny fanohanana ny toe-karena dia efa nanimba ny FTA ry zareo. Firenena matanjaka noho i Korea ry zareo tamin’ny taona 70.[…] Aty aoriana dia mitady haka tahaka an’i Philippines i Korea. Tokotokony ho 20 arivo arivo eo ho eo (US$20,000) eo ho eo ny saram-pianarana any amin’ny sekoly ambaratonga faharoa any Philippines… betsaka amin’izany ny mpianatra avy amin’ny sarangan’ny mpanankarena sy ireo avy any Amerika. Hanangana sekoly tsy miankina 300 ihany koa i Korea … tsara kosa izany koa …[…]
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2008/01/29/591/
 Kim Hyung Seok: http://grands.tistory.com/entry
 mpampianatra Koreana: http://bbs1.agora.media.daum.net/gaia/do/debate/read?bbsId=D102&articleId=55416
 Tsy vitsy ny Olonineto: http://bbs1.agora.media.daum.net/gaia/do/debate/read?bbsId=D003&articleId=423131